Ny chip tsara indrindra ho an'ny alika sy ny fifehezana tsara ny biby fiompinao | Tontolo alika
Ny chip tsara indrindra ho an'ny alika ary mifehy tsara ny biby fiompinao
Ny chip ho an'ny alika dia vokatra tena ilaina mba hahafantarana ny biby fiompinao sy hanafainganana sy hanamorana ny dingana raha sanatria ka very. Ny puce izay mampahafantatra ny rezistra ary ampidirina ao ambanin'ny hoditry ny alikantsika dia azo alentika fotsiny amin'ny mpitsabo biby, na izany aza, rehefa vita ity tranga ity dia mety ho liana amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny alikantsika isika.
Noho izany, Eo an-tsena dia mahita vokatra mahaliana be isika, collars GPS, ahafahantsika mahalala hoe aiza ny alikantsika amin'ny fotoana rehetra ary mampiditra asa tena ilaina. Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba azy ireo izahay ary misy ifandraisany bebe kokoa amin'ilay puce. Ho fanampin'izay, mamporisika anao koa izahay hijery ity lahatsoratra hafa ity ny dingana tena ilaina 4 rehefa mandray alika.
Traactive DOG GPS 4....
GoPetee Collar ...
Nadalan Smart Finder ...
Sonew Reader ho an'ny ...
1 Ny chip tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 GPS misy fandrakofana manerantany
1.2 Mpamaky puce biby
1.3 GPS misy kaody QR
1.4 Mpamaky puce kely sy matevina
1.5 GPS alika GPS
1.6 Volombava GPS maharitra
2 Inona no atao hoe chip ho an'ny alika?
3 Ny maha-zava-dehibe ny puce
4 Tsy maintsy atao ve ny mamantatra ny alikako amin'ny microchip?
5 Aiza no hividianana chips alika
Ny chip tsara indrindra ho an'ny alika
GPS misy fandrakofana manerantany
Ity mpikaroka na GPS azo ampiharina alika ity dia fitaovana iray izay mifamatotra amin'ny vozon'akanjonao. Manana fiasa tena milay sy mahasoa be dia be izy, ka tsy ho very ny biby fiompinao. Ohatra, ny GPS-ny dia miasa any amin'ny firenena maherin'ny 150, manana fiarovana fefy fiarovana izy io izay ampandehanana fampitandremana rehefa mandao ilay faritra nofaritanao ho azo antoka ny alikao ary mety ho hitanao hoe ohatrinona ny kaloria may azy io mba hitazomana azy ho mendrika. .
Na izany aza, Toy ny maro amin'ireo GPS ireo dia tadidio fa, ankoatry ny fitaovana, dia mila manana drafitra isam-bolana ianao, herintaona, roa na dimy hahafahanao mampiasa ireo fiasa rehetra, ary koa mampidina fampiharana ho an'ny findainao.
Mpamaky puce biby
Mpamaky chip sy microchip ilaina, fitaovana ampiasain'ny mpitsabo biby sy ny matihanina hahafahany mamaky angona avy amin'ny puce pet. Izy io dia miasa amin'ny karazana biby fiompy: alika, saka… ary koa sokatra! Na izany aza, tsy miasa amin'ny biby fiompy toy ny ondry na soavaly izany. Mila mitondra ny mpamaky fotsiny ianao amin'ny 10 santimetatra na latsaka avy eo amin'ilay toerana misy ny puce mba hahafahan'ny fitaovana mamaky azy ary miseho eo amin'ny efijery ny atiny. Ho fanampin'izay, ny famahana azy mora dia mora, fitaovana USB fotsiny no ilainao.
GPS misy kaody QR
QR4G.com GPS Plate ...
Mety ho ny GPS mora indrindra hitanao. Na dia tsy misy chip ho an'ny alika aza dia ilaina tokoa ny mitady ny alikanao raha tsy mila fitaovana lafo vidy kokoa na miaraka amin'ny drafitra fandoavam-bola. Izy io dia misy badge miaraka amina kaody QR. Rehefa very izy dia tsy mila maka sary ny kaody fotsiny ilay olona mahita azy raha hijery ny angon-drakitra biby (anarana, adiresy, tsy mahazaka ...) ary mba hahazo mailaka manana ny toerana misy ilay famakiana ilay tompony vita.
Mpamaky puce kely sy matevina
Tsy toy ny maodely natolontsika teo aloha, ity mpamaky chip ity dia mety amin'ny karazana biby rehetra, fa tsy amin'ny alika ihany, satria mamela ihany koa ny famantarana ny ondry na ny soavaly. Mora be ny mampiasa azy, satria tsy maintsy entinao manakaiky kokoa ilay faritra hamakiana azy io ilay puce. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mampiditra azy amin'ny USB ary, rehefa fantatry ny solosainao dia azonao atao ny mitantana ireo rakitra novakian'ny puce avy amin'ny fampirimana. Ary farany, ny fahitana dia manana fahitana tena avo.
GPS alika GPS
Weenect Dogs 2 - Ny ...
Chip iray hafa ho an'ny alika izay azonao ampidirina amin'ny vozon'akanjon'ny biby fiompinao mba hifehezana azy amin'ny fotoana rehetra. Ity maodely ity dia fanoherana ny famoahana ary, ankoatr'izay, dia misy fiasa tena mahaliana, toy ny GPS misy toerana misy azy, fa koa ny fanairana. Tsy tantera-drano izy hatramin'ny iray metatra ary, toy ny vokatra marobe amin'ity karazany ity, dia mila famandrihana izay mety ho isam-bolana, isan-taona na telo taona. Farany, ampidiro tantara miaraka amin'ireo zotra izay narahin'ny alika nandritra ny dia an-tongotra.
Volombava GPS maharitra
KIPPY - EVO - Ilay Vaovao ...
Ary mamarana an'ity GPS mahaliana ity izahay, miaraka amina endrika tena milay ary misy loko telo, maitso, volontany na mavokely, azonao ampidirina amin'ny kiran'ny alikao mba hahitana azy io maharitra. Izy io dia tsy misy rano ary, anisan'ireo asany tena mahaliana, fahita amin'ny vokatra hafa, toy ny GPS na ny fefy fiarovana, izy io koa dia manana ny mampiavaka azy izay mety hahatonga azy io ho safidy tsara ho anao, ohatra, ny vidin'ny fisoratana anarana, betsaka mora kokoa noho ny maodely hafa (mihoatra ny 3 € fotsiny) na ny lanjany, satria maivana be izy io.
Inona no atao hoe chip ho an'ny alika?
Amin'ity lahatsoratra ity dia nanolotra lahatsoratra vitsivitsy taminao izahay, azonao alaina ao amin'ny Amazon sy izany Mamela anao hanara-maso ny alikanao amin'ny alàlan'ny GPS izy ireo na hamaky ilay puce izay efa napetany. Mazava ho azy fa tsy afaka mametraka am-pifaliana amina alika ny olona iray fa mila manatona mpitsabo biby.
Ny chips, raha ny marina, izy ireo dia microchips kely voafono ao anaty kapsily izay ampidirina anaty rano anaty biby fiompinao. Atao amin'ny tsindry tsotra izy io, ary tsy mahazo aina amin'ny biby izy ireo, ary tsy mahazaka aretin-koditra. Fa kosa, fitaovana mandaitra tokoa izy io hahitana ny biby fiompinao raha very.
Araka ny noteneninay, ny chip dia apetraky ny veterinera iray. Izany dia mirakitra ny angon-drakitra an'ny olombelona, ​​toy ny adiresy, ny anarany ary ny nomeraon-telefaona, ary ahafahana mitazona rakitsoratra voafehy ihany koa ny biby fiompy rehetra. Tsotra be ny fomba fanao: mila mameno endrika iray fotsiny ianao miaraka amin'ny angon-drakitrao, izay hiditra ao anaty puce, hampandre ny fisoratana anarana ny mpitsabo ary afaka herinandro vitsivitsy dia hahazo taratasy any an-tranonao ianao, taratasy manamarina ny biby dia voasoratra anarana ary mari-pamantarana famantarana miaraka amina kaody QR izay azonao apetraka amin'ny vozon'akanjonao toy ny fiarovana fanampiny.
Ahoana no azonao an-tsaina tena ilaina tokoa ny fitazonana ny mombamomba anao manokana hatrany, satria, raha very ny alikanao dia afaka averin'izy ireo aminao izany.
Ny maha-zava-dehibe ny puce
Voalaza fa ny sary dia mitentina teny arivo, ary afaka miteny toy izany koa isika momba ny isan-jato, izany asehoy tsara ny zava-misy sy toe-javatra sasany momba ny maha-zava-dehibe ny puce. Araka ny fanadihadiana iray momba ny Affinity:
Izao ihany 34,3% amin'ireo alika nalain'ny mpiaro no mitondra chip
Amin'ireny, tratra izany avereno 61% ny tompony
Na izany aza, raha mijery ny totalin'ny alika tonga any amin'ny fialofana isika, sAzo atao ihany ny mamerina 18%
Ny ambiny 39% amin'ireo amboa dia tsy afaka mody na satria ireo fianakaviana nandao na namoy azy ireo dia tsy mandray finday na noho izy ireo manana data tsy mety (izany no nilazanay fa zava-dehibe tokoa ny fanavaozana ny rezistra)
Tsy maintsy atao ve ny mamantatra ny alikako amin'ny microchip?
Any Espana dia tsy maintsy atao ny mamantatra biby fiompy, na dia tsy voatery atao puce aza (Eny, amin'ny alika mety hampidi-doza io), ohatra, amin'ny alàlan'ny tatoazy kely, marika ...
Na izany aza, Na dia tsy takiana amin'ny fametrahana microchip ao anaty biby aza isika amin'ny lalàna, ny olona tsara mendrika ny sira no hanao izany. Araka ny efa nolazainay, ny microchip dia zava-dehibe mba hahitana ny biby fiompintsika raha very na nangalarina, ho fanampin'izay dia manampy amin'ny fisorohana ny fandaozana azy io. Raha fintinina, tsy hoe azo antoka kokoa ho an'ny biby izy io, fa miantoka ihany koa ny fahasambarana, satria mampitombo ny fahafaha-mody miaraka amin'ny fianakaviany.
Aiza no hividianana chips alika
Manaraka izany dia tsy asehonay anao fotsiny hoe aiza ianao no afaka mividy chips ho an'ny alika, fa milaza aminao ihany koa izahay hoe aiza no hividianana mpamaritra samy hafa hitazonana ny biby fiompinao ho voafehy:
Raha te hahafantatra ny alikanao amin'ny puce subcutaneaux ianao dia mila mitondra azy mankany a vet. Ity (na ity) dia ho tompon'andraikitra amin'ny fampidirana azy ary fampahafantarana amin'ny rezistra ny angon-drakitra biby. Ity fizotrany ity dia azo atao amin'ny mpitsabo biby fotsiny.
Raha ankoatry ny puce dia te hanana hafa fomba fanampiny hitazomana ny alikanao hanaraka tsara, misy safidy maro hafa azonao ampiasaina:
En Amazon Hahita vokatra marobe ianao toy ny collars GPS, takelaka, takelaka misy QR ... hahafahanao mifehy ny alikanao ary, raha mandositra izany, dia afaka manampy be dia be izy ireo hahitana azy io raha vantany vao azonao atao .
Ankoatr'izany, amin'ny magazay biby an-tserasera toa an'i TiendaAnimal na Kiwoko dia hahita marika marobe sy rojo marobe koa ianao, na dia kely aza ny karazany. Manolotra anarana marika GPS mahaliana ihany koa izy ireo izay mety hahasoa anao.
Farany, misy marika finday (toa an'i Vodafone) na GPS fiara (toa an'i Garmin) izay manolotra ihany koa ny vozon'akanjo mpamantatra alika ho azy ireo. Na izany aza, mazàna lafo kokoa izy ireo.
Chip ho an'ny alika dia vokatra tsara hitazomana ny alikanao raha sanatria very, sa tsy izany? Lazao aminay, efa nanana traikefa tamin'ny iray amin'ireo marika ireo ve ianao? Manana sombina ve ny alikanao? Mihevitra ve ianao fa ampy izany sa tianao kokoa ny manamafy azy amin'ny GPS?
Fuentes: Foundation Affinity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Ny chip tsara indrindra ho an'ny alika ary mifehy tsara ny biby fiompinao
Sakana ho an'ny alika
Ahoana ny fomba fanadiovana sofina alika